မြန်မာ-အိန္ဒိယ ချစ်ကြည်ရေး လမ်းပေါ်၌ ကွန်ကရစ် တံတားများ တည်ဆောက်ရန် တံတားနှင့် လွတ်ကင်းမှု မရိ - Yangon Media Group
မြန်မာ-အိန္ဒိယ ချစ်ကြည်ရေး လမ်းပေါ်၌ ကွန်ကရစ် တံတားများ တည်ဆောက်ရန် တံတားနှင့် လွတ်ကင်းမှု မရိ
တမူး၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁
မြန်မာ-အိန္ဒိယချစ်ကြည်ရေးလမ်းဖြစ်သည့် တမူး- ကလေး-ကလေးဝကားလမ်းပေါ်ရှိ တံတားများကို အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ အကုန်အကျခံ၍ ကွန်ကရစ်တံတား ကြီးများအဖြစ် တည်ဆောက်သွား မည်ဖြစ်သည့်အတွက် ယခုအခါ တံတားနှင့်လွတ်ကင်းမှုမရှိသည့် အဆောက်အအုံများကို စတင်ဖယ်ရှားရှင်းလင်းနေပြီဖြစ်ကြောင်း ကလေးခရိုင်လမ်းဦးစီးဌာနမှ လက် ထောက်အင်ဂျင်နီယာဦးအောင် ကျော်ဦးက ဇန်နဝါရီ ၃၁ရက်တွင်ပြောကြားသည်။
”ကျွန်တော်တို့ တမူး-ကလေး- ကလေးဝလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ တံတားတွေကို အိန္ဒိယအစိုးရက အကုန်အကျခံပြီး ကွန်ကရစ်တံတားအဖြစ် တည်ဆောက်ပေးတဲ့ နေရာမှာ အခုသွားလာနေတဲ့ ယာဉ်ကြီးယာဉ်ငယ်တွေ အဆင်ပြေချော မွေစွာသွားလာနိုင်ဖို့ တံတားရှောင်လမ်းတွေ ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ တံတားရှောင်လမ်းနဲ့လွတ်ကင်းမှု မရှိတဲ့စိုက်ခင်း၊ ခြံ၊ဓာတ်တိုင်တွေ၊ အဆောက်အအုံတွေကို သက်ဆိုင် ရာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီး ရွှေ့ပြောင်းဖယ်ရှားမှုတွေ ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောကြားသည်။
တမူး-ကလေး-ကလေးဝ(အိန္ဒိယ-မြန်မာ)ချစ်ကြည်ရေးလမ်းမကြီးတွင် တံတားအစင်းပေါင်း ၆၉စင်း ရှိရာ ယခု ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်တံတား ၄၂ စင်းကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် မတ်လ ၁၅ရက်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရမှ ကွန်ကရစ်တံတားအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။ ”တမူး-ကလေး-ကလေးဝ ကားလမ်းမှာရှိတဲ့ တံတားအများစုဟာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်လက်ကျန် တံတားတွေဖြစ်ပြီး၊ လမ်းတွေကို အိန္ဒိယနိုင်ငံကနှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေး လမ်းမကြီးအဖြစ် ၁၉၉၉-၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ်မှာ ဖောက်လုပ်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိ တံတား တွေ၊ လမ်းတွေမှာ အဆင့်မြှင့်တင် ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရေးကို အခြေခံပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ သုံးနှစ်စီမံကိန်းအဖြစ် အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၆ဝအကုန် အကျခံတည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ကလေးခရိုင် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကိုကိုနိုင်ကပြောကြားသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရအကူအညီ ဖြင့် တံတားများတည်ဆောက်ရေး အတွက် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ဇန်နဝါရီ ၃ဝရက်တွင် ကလေးမြို့ လမ်းဦးစီးဌာနရုံးခန်း၌ ကျင်းပခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။
ရိဒ်နယ်စပ်ရောင်းဝယ်ရေး ကောင်းမွန်နေသည့် အတွက် နယ်စပ်ပြေးဆွဲသည့် ကားများ တွက်ခြေကိုက်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကြေးရုပ်တုကို သယ်ဆောင်လာစဉ် ပွင့်ဖြူဒေသခံပြည်သူ ၇ဝဝ ခန့် ကြိုဆို
‘မုန်းစွဲ’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို မြန်မာနှင့် စင်ကာပူရှိ ရုပ်ရှင်ရုံ ၆၃ ရုံတွင် ဒုတိယအပတ် အ??
နယူးမက္ကဆီကိုတွင် ခရီးသည်တင် ယာဉ်နှစ်စီး ရင်ဆိုင်တိုက်မိ၊ အနည်းဆုံး လေးဦးသေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရသ??
သစ်တော ဦးစီးဌာနပိုင် မြေများတွင် ပုဂ္ဂလိကစိုက်ခင်း တည်ထောင်ရန် ခွင့်ပြုထားသည့် မြေဧက ခြော??
အမေရိကန် စစ်တပ်များ ဆီးရီးယားမှ စတင်ရုပ်သိမ်း၊ အချိန်အတိအကျ သတ်မှတ်ချက် မရှိဟုဆို
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် အမှတ်(၁)အထကကျောင်း??